XOG RASMI AH:- Madaxda madasha Qaran iyo beesha caalamka oo isku dhacay iyo arrintaasi oo halis ku socota – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Madaxda madasha Qaran iyo beesha caalamka oo isku dhacay iyo arrintaasi oo halis ku socota
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xafiiska UN-ka ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda madasha Qaran iyo wakiiladda beesha caalamka ee ku sugan dalka ay isku dhaceen.
Wararka ayaa sheegaya in arrintaan ay salka ku heyso ismari waa’ ka taagan xildhibaano dacwad ka taagan tahay oo qaarkood ay laaleen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka, taas oo keentay in madasha ay iska dhega mariso dalabkii beesha caalamka.
Beesha caalamka ayaa dooneysa in 24 kursi oo qaabka loo doortay ay hareeyeen dhibaatooyin isugu jira, awood sheegasho, laaluush, boob, ergo been buur ah, afduub iyo shaqaaqooyin la kansalo dibna loogu tartamo, waxayna caddeyn ka dalbatay guddiga xalinta khilaafaadka inay dadka usoo bandhigaan warbixinta kiisaskaasi iyo qaabkii loo raacay in la laalo, isla markaana kuwii laga reebay sababta looga reebay.
Dadaal iyo shirar ay waday beesha caalamka ayaa waxba kasoo bixi waayeen, kadib markii guddigu ku dooday in loo hanjabay oo xaaladooda ammaan halis ku jiro, madaxda madasha qaranna ay diideen in la laalo kuraasta 11-ka xildhibaan.
Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa qoraalkii ugu danbeeysay ay soo saartay ugu digtay madaxda madasha inay qaadan waayaan tallaabada ku haboon ee lagu saxaayo khaladaadka ka dhacay doorashada, iyadoo loogu sheegay inay taasi dhaawici karto shaqsiyadooda, sharxiyadda dowladda soo socota iyo dowladda xigta ee 2020-ka.
Sarkaal ka tirsan xafiiska UNSOM xarunta magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in hadii madaxda madasha qaran ay diidaan inay fuliyaan go’aanadii guddiga xalinta khilaafaadka, islamarkaana guddiga xalinta khilaafaadka keeni waayo sababtii uu 13 xildhibaan oo dacwado ka yaalaan uga reebay liiska la laalay ay qaadi doonaan tallaabo adag.
Wuxuu sarkaalkaasi inoo sheegay in tallaabadaasi ay noqon doonto in golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay la horgeeyo dhammaan magacyada xildhibaanada 24-ka ah oo sida sharci darrada ah lagu soo doortay, si waxba kama jiraan looga soo qaado doorashada ay kusoo baxeen.